Imiklomelo ye-Prairie CARE
I-Chest Pain Network
I-Peripheral Artery Disease
I-Varicose Vein Clinic
Yabelana Ngendaba Yakho
Thola Udokotela kanye ne-APC
I-Prairie Education & Research Cooperative
Ukuvakasha Kwehhovisi Elibonakalayo Manje Kuyatholakala e-Prairie Cardiovascular - FUNDA KABANZI
Imaski Yobuso Iyadingeka Ekuqokweni Kwakho
Khumbula ukuletha imaski yobuso ngesikhathi sakho esimisiwe!
Amamaski asadingeka kuzo zonke izindawo zasePrairie Heart e-Illinois.
Kucwaningwe. Kufakazelwe. Umholi.
Ochwepheshe abangu-#1 besifo senhliziyo.
Hlela Isikhathi Sakho Manje!
I-Vein, Vein Hamba
Ungahlushwa isifo semithambo ngeze!
Thatha Ukuhlolwa Kwempilo Yemithambo
Ukudlula Inhliziyo Yakho.
Yilokho esikwenzayo lapha.
Thola Udokotela Wakho Manje!
Ukuvakasha Kwehhovisi Elibonakalayo Manje Kuyatholakala e-Prairie Cardiovascular
Ngesikhathi senhlekelele ye-COVID-19, iPrairie Cardiovascular iyajabula ukusinikeza ukuvakasha okubonakalayo kosuku nosuku olulandelayo ukuze kuphephe futhi kube lula kweziguli zethu.
Ukuze uhlele i-aphoyintimenti, sicela ushayele
Thola Udokotela wasePrairie
Thola Udokotela Wenhliziyo YasePrairie Manje
Thola Udokotela Wakho
Ama-aphoyintimenti osuku olufanayo nosuku olulandelayo ayatholakala
Abaholi Ekunakekelweni Kwenhliziyo
Lapho udinga okungaphezu kukadokotela, lapho udinga uchwepheshe wenhliziyo, iPrairie Heart inempendulo. Ukusuka ku-cholesterol ephezulu kuye kumfutho wegazi ophakeme, ama-aneurysms kuya ku-arrhythmia, ubuhlungu besifuba kuya ekunakekelweni kwenhliziyo, ochwepheshe be-Prairie Heart bakulungele ukuma eceleni kwakho kulo lonke uhambo lwakho oluya enhliziyweni enempilo.
HLELA UKUQokwa KWAKHO MANJE
Gcwalisa leli fomu elingezansi.
I-Prairie Cardiovascular ingumholi kazwelonke ekunikezeni izinga eliphezulu, ukunakekelwa kwenhliziyo okusezingeni eliphezulu kanye nokunakekelwa kwemithambo. Ukwenza i-aphoyintimenti nodokotela bethu abasezingeni lomhlaba nama-APC bekungeke kube lula.
Ngethu UKUFINYELELA Prairie Uhlelo, isicelo sakho se-aphoyintimenti sithunyelwa ngokuphephile eqenjini lethu labahlengikazi abaqeqeshwe kakhulu benhliziyo. Bazokunikeza usizo lomuntu siqu ekwenzeni isikhathi noDokotela kanye ne-APC ekufanelekela kangcono ukwelapha inhliziyo yakho nezidingo zemithambo yegazi.
Ngemva kokugcwalisa ifomu, i-imeyili evikelekile izothunyelwa ethimbeni lethu laba UKUFINYELELA Prairie abahlengikazi. Uzothola ikholi yokubuyisela phakathi kwezinsuku ezingu-2 zebhizinisi.
Uma uzwa sengathi lokhu kuyisimo esiphuthumayo, sicela ushayele ku-911.
Ngokugcwalisa ifomu, uyavuma ukuthola ukuxhumana okuvela ku-Prairie Heart.
Ikhodi ye-ZIP *
Usuku lokuzalwa * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Inombolo Yocingo Yokuxhumana *
Udokotela Okhethwayo kanye ne-APC (uyazikhethela)
Indawo ekhethwayo (ongakukhetha)
Isizathu sokuthi ucele i-aphoyintimenti *
Uma ukhetha ukukhuluma nomuntu ngokuqondile, umhlengikazi angafinyelelwa ngokushayela I-217-757-6120.
Izindaba ziyasikhuthaza. Izindaba zisisiza ukuba sizwe umuzwa wokuxhumana nabanye. Izindaba ziyingxenye yento enkulu kunathi. Ezinhliziyweni zabo, izindaba zisisiza siphulukise. Simema wonke umuntu ukuthi afunde izindaba ezingezansi futhi akhuthaze iziguli zethu nemindeni yazo ukuthi babelane ngendaba yabo siqu ye-Prairie.
Ukuqeqeshwa Kwe-CPR Yezandla Kuphela
Ngesikhathi uSteve Pace ewa phansi, unkosikazi wakhe uCarmen ushayele u-9-1-1 futhi ngokushesha waqala ukucindezelwa isifuba. Wayengenaso isiqiniseko sokuthi usebenzisa indlela efanele, kodwa odokotela, abahlengikazi nabaphenduli bokuqala bayavuma ukuthi isenzo sakhe esisheshayo sisindise impilo kaSteve, samgcina ephila yaze yafika i-ambulensi.
Likhuthazwe indaba yokucabanga okusheshayo kuka-Carmen, ithimba e-Prairie Heart Institute lethule ukuqeqeshwa kwe-“Keeping the Pace – Hands Only CPR” ukuletha indlela elula yokusindisa impilo emphakathini.
I-Hands Only CPR inconywe yi-American Heart Association kwababukele abangaqeqeshiwe ku-CPR. Kuyanconywa futhi ezimeni lapho umhlengi engakwazi noma engazimisele ukunikeza umoya ophuma emlonyeni uye emlonyeni.
Ukubuka ividiyo ye-Pace, ukufunda kabanzi noma ukucela iseshini ye-Hands Only CPR emphakathini wakho, sicela inkinobho engezansi.
I-Extravascular Implantable Cardioverter Defibrillator (EV ICD), i-hypertrophic Cardiomyopathy
Amajita emisebenzi emisha ajwayelekile. Kodwa ake ucabange uqala umsebenzi omusha nge-pacemaker entsha - owokuqala e-United States futhi owesibili emhlabeni wonke ozotshalwa kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuphenya ukwelapha isigqi senhliziyo esisheshayo esiyingozi. [...]
Ukushintshwa Kwe-aortic Valve
Bengifuna ukuthatha isikhashana ngithi NGIYABONGA ethimbeni le-TAVR!!! Babevelele emazingeni amaningi! Konke kwaqala ngo-April ka-2013. Umkhwe wami omnandi, u-Billy V. Williams, wayenezikhathi zokuquleka futhi kamuva watshelwa ukuthi kwakuhlobene nenhliziyo yakhe. Ngemuva kokuhlolwa okuningi, izinqumo zaba […]
CABG, I-Cardiac Catheterization, Ubuhlungu besifuba
Ngashonelwa ngubaba ngo-Feb. 4, 2017, izinsuku ezingu-5 ngaphambi kosuku lwakhe lokuzalwa lwama-89. Ngiseyingane ngangihlala ngimbona ubaba njengomuntu ongahlulwa lutho. Ubengumvikeli wami, umqeqeshi wempilo yami, iqhawe lami!! Njengomuntu omdala, ngabona ukuthi kungenzeka angabi khona ngaso sonke isikhathi kodwa ngangazi inqobo nje uma ehamba lokhu […]
Into yokugcina oyidingayo ukuhlinzwa okudinga isikhathi eside sokululama. E-Prairie Heart, sisebenza ngokukhethekile ekuhlinzeni okusha, okuhlasela kancane okungagcini nje ngokwenza umsebenzi wenziwe, kodwa futhi okukubuyisela ekubeni nguwe ngokushesha kunezinqubo zendabuko.
Funda Kabanzi Futhi Thola Amaresiphi
Nakekela Eduze Nekhaya Lakho
Sibusisekile ngokuhlala endaweni enemiphakathi eqinile lapho sizizwa sikhululekile futhi sanelisekile. Kodwa uma sinenkinga yenhliziyo engase idinge ukunakekelwa okukhethekile, ngokuvamile kusho ukuthi sibhekene nokukhetha ukushiya umphakathi wethu noma okubi nakakhulu, ukubekela eceleni ukunakekelwa. Lokhu akunjalo lapho ukunakekelwa kwakho okukhethekile kunikezwa oDokotela basePrairie cardiologists. Ifilosofi yethu e-Prairie Heart Institute ukuletha ukunakekelwa okukhulu ngangokunokwenzeka endaweni. Uma lokho kungenakwenzeka, ngaleso sikhathi futhi kuphela, kuzonconywa ukuhamba.
Thola Udokotela kanye ne-APC Eduze Kwawe
Ngaphezu kwezindawo ezicishe zibe ngu-40 ezizungeze i-Illinois lapho odokotela benhliziyo bePrairie bebona iziguli endaweni yesibhedlela sendawo, kunezinhlelo ezikhethekile eSpringfield, O'Fallon, Carbondale, Decatur, Effingham naseMattoon.
Uma ubhekene nezimpawu zokuhlaselwa yinhliziyo, Dial Don't Drive.
Sicela ushayele ku-911 bese ulinda usizo.
Kulo nyaka kuphela, abantu baseMelika abayizigidi eziyi-1.2 bazobhekana nesimo esiphuthumayo senhliziyo. Ngeshwa, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yalezi ziguli izoshona ngaphambi kokuba zifike esibhedlela ngesizathu esisodwa esibalulekile - ukubambezeleka ekutholeni ukwelashwa okubalulekile.
LAPHO UBUHLUNGU BESIFUBA, HLAKANIPHA – UDAYELE NJALO, UNGASHAYELI.
Iziguli eziningi kakhulu ezihlaselwa yinhliziyo zizishayela noma zibe nelungu lomndeni eliziqhubela esibhedlela. Ngokujabulisayo, ikhona indlela yokusiza ukunciphisa lezi zibalo ezilimazayo. "Kumayelana Nesikhathi" uhlelo olwakhiwe yi-Chest Pain Network ye-Prairie Heart Institute yase-Illinois (PHII), exhumanisa izibhedlela kanye nama-ejensi we-EMS ukunakekelwa okusheshayo nokungcono kakhulu kweziguli ezibuhlungu esifubeni. Njalo shayela u-911 ukuze uthole usizo lwezokwelapha - ungalokothi uzishayele - lapho kuvela izimpawu eziyisixwayiso zokuhlaselwa yinhliziyo.
Uma uhlangabezana nezimpawu zokuhlaselwa yinhliziyo, umzuzwana ngamunye owuwongayo ungasho umehluko phakathi kokulimala kwenhliziyo okungalungiseki noma isimo esilapheka, ngisho nokuphila noma ukufa. Ngokudayela u-911 kuqala, ukwelashwa kuqala ngesikhathi kufika abezimo eziphuthumayo. Ochwepheshe be-EMS nabanye abaphenduli bokuqala bangakwazi:
Hlola isimo sakho ngokushesha
Thumela ngokushesha okubalulekile kwakho kanye nolwazi lwe-EKG kunoma yisiphi isibhedlela esingaphakathi kwe-PHII Chest Pain Network
Lawula ukwelashwa nge-ambulensi
Qinisekisa ukuthi ithimba lenhliziyo yasesibhedlela lizobe likulindile futhi likulungele ukufika kwakho
Sheshisa ngempumelelo isikhathi kusukela kuphawu lokuhlaselwa yinhliziyo kuya ekwelashweni
Amathiphu Okulungiselela Okuvakasha Kwakho
Qiniseka ukuthi Sinamarekhodi Akho Ezokwelapha
Uma udokotela wakho siqu ekuthumele ku-Prairie Cardiovascular, uzosithinta ngocingo noma athumele amarekhodi akho ehhovisi lethu. Kubaluleke kakhulu ukuthi sithole amarekhodi akho okwelashwa. Uma kungenjalo, udokotela wakho wenhliziyo ngeke akwazi ukukuhlola ngokwanele futhi kungase kudingeke ukuthi uhlele kabusha ukuqokwa kwakho kuze kube yilapho lawo marekhodi atholakala. Uma uzithumele wena, kufanele uxhumane nodokotela wakho futhi uhlele ukuthi amarekhodi akho athunyelwe ehhovisi lethu ngaphambi kokuvakasha kwakho okuhleliwe. Umlando wakho wezokwelapha odlule ubalulekile ekuxilongeni nasekwelashweni.
Letha Lonke Ulwazi Lwakho Lomshwalense kanye Nelayisensi Yakho Yokushayela
Lapho wenza i-aphoyintimenti nathi, uzocelwa imininingwane yakho yomshwalense ezoqinisekiswa yithi ngaphambi kokuqokwa kwakho. Kufanele ulethe ikhadi lakho lomshwalense kanye nelayisense yakho yokushayela ekuqokweni kwakho kokuqala. Ungathola okwengeziwe ngezinqubomgomo zethu zezezimali ngokushayela uMnyango Wezezimali Weziguli.
Letha Yonke Imithi Yakho
Sicela uphathe yonke imithi yakho ezitsheni zayo zakuqala lapho uza ehhovisi. Qinisekisa ukuthi udokotela wakho uyazi ngazo zonke izidakamizwa ozithathayo, kuhlanganise nezidakamizwa ezitholakala ngaphandle kwe-counter kanye nemithi ye-herbal. Omunye umuthi ungase uhlanganyele nomunye, kwezinye izimo udale izinkinga ezinkulu zezokwelapha. Ungathola ifomu elilula lokuklelisa yonke imithi yakho lapha.
Gcwalisa Amafomu Amasha Olwazi Lwesiguli
Lolu lwazi lubaluleke kakhulu futhi luzosheshisa inqubo lapho ufika ehhovisi. Amakhophi amafomu akho angatholakala ngezansi. Ungafeksa amafomu ehhovisi lethu kusenesikhathi ku-833-776-3635. Uma ungeke ukwazi ukuphrinta amafomu, sicela ushayele ihhovisi lethu ku-217-788-0706 futhi ucele ukuthi amafomu athunyelwe kuwe. Ukugcwalisa/noma ukubuka amafomu ngaphambi kokuqokwa kwakho kuzokongela isikhathi.
Ishidi Lemiyalelo Yokugunyazwa
Isaziso Semisebenzi Yobumfihlo
Ukuhlolwa Kwakho: Okufanele Ukulindele
Ngemva kokugcwalisa ukubhaliswa kwakho futhi nobhalisi enolwazi lwakho lomuntu siqu oludingekayo kanye nolwazi lomshwalense, umhlengikazi uzokubuyisela ekamelweni lokuhlolwa lapho ezothatha khona umfutho wegazi lakho kanye neshayela.
Umhlengikazi uzophinde athathe umlando wakho wezokwelapha ukuze athole hhayi nje kuphela ukuthi yimiphi imithi oyithathayo kodwa ukuthi yikuphi, uma kukhona, ukungezwani komzimba okungenzeka ube nakho; hlobo luni lwezifo zangaphambilini noma ukulimala okungenzeka ukuthi uke wabhekana nakho; kanye nanoma yikuphi ukuhlinzwa noma ukuhlala esibhedlela okungenzeka ube nakho.
Uzobuzwa futhi mayelana nempilo yomndeni wakho kuhlanganise nanoma yiziphi izimo zofuzo ezingase zihlobane nempilo yakho yenhliziyo. Okokugcina, uzobuzwa ngesimo sakho somshado, umsebenzi nokuthi uyawusebenzisa noma cha ugwayi, utshwala nanoma yiziphi izidakamizwa. Kungase kusize ukubhala phansi yonke imicimbi yakho yezokwelapha kanye nezinsuku futhi uze nalokhu ekuvakasheleni kwakho.
Uma umhlengikazi eseqedile, udokotela wenhliziyo uzohlangana nawe ukuze abuyekeze umlando wakho wezokwelapha futhi akuhlole ngokomzimba. Ngemva kokuhlolwa, uzoxoxa nawe nomndeni wakho ngalokho akutholile futhi ancome noma yiziphi ezinye izinhlelo zokuhlola noma zokwelashwa. Sicela uzizwe ukhululekile ukubuza udokotela wenhliziyo yonke imibuzo ongase ube nayo ngalesi sikhathi. Odokotela bethu basebenzisa Abasizi Bodokotela nabahlengikazi abaqeqeshwe ngokukhethekile ekulawuleni inhliziyo nemithambo yegazi ukuze babone iziguli ngezikhathi ezithile. Uma kunjalo, ukuvakasha kwakho kuzobe sekubuyekezwa udokotela wakho.
Kwenzekani Ngemva Kokuvakasha Kokuqala?
Ngemva kokuvakasha kwakho nodokotela wenhliziyo, ihhovisi lethu lizodlulisela wonke amarekhodi enhliziyo, imiphumela yokuhlolwa, kanye neziphakamiso zokwelashwa kudokotela wakho oqondisayo. Kwezinye izimo, singase sihlele ukuhlolwa okwengeziwe ozodinga ukuthi ubuye ngakho. Sinoxhaxha lwezivivinyo nezinqubo—eziningi zazo ezingezona ezihlaselayo— ezandleni zethu esingenazo ngisho neminyaka eyi-10 edlule ukuze zisisize sithole izinkinga futhi sizilungise ngokushesha, kusenesikhathi ngaphambi kwanoma yisiphi isigameko senhliziyo.
Uma unemibuzo, sicela ushayele umhlengikazi wezifo zenhliziyo. Ngenxa yomthamo wethu wezingcingo zansuku zonke, yonke imizamo izokwenziwa ukubuyisela ucingo lwakho ngesikhathi. Noma iyiphi ikholi etholwe ngemva kuka-4:00 ntambama ngokuvamile izobuyiselwa ngosuku lwebhizinisi olulandelayo.
Usizo Olujwayelekile Luyatholakala
Uma unombuzo mayelana nokuvakasha kwakho okuzayo, sicela uthinte.
Ukucela ukukhishwa kolwazi noma amarekhodi
UMnyango Wokuthobela imithetho uyacubungula konke izicelo zokukhululwa kolwazi lwesiguli. Ukuze usize iziguli ekufinyeleleni ulwazi lwazo lokunakekelwa kwezempilo (amakhophi aqinile amarekhodi ezokwelapha), iziguli kufanele ziqedele ngokuphelele i-Prairie Cardiovascular Consultants. Ukugunyazwa Ukusebenzisa kanye/noma Ukudalula Ifomu Lolwazi Oluvikelwe.
Wonke amafomu okugunyazwa agcwalisiwe, asayiniwe futhi anedethi angabuyiselwa ku:
Attn: Umnyango Wokuthobela
NOMA I-imeyili: HIPAA2@prairieheart.com
NOMA thumela ifeksi ngqo eMnyangweni Wokuthobelana: 833-776-3635
Ukugunyazwa Ukusebenzisa kanye/noma Ukudalula Ulwazi Oluvikelwe
Ishidi lemiyalo yokugunyazwa
Ishidi Lokugunyazwa Kwesihlobo Esihlobene
Yiziphi izimali ezihambisana nokucela amarekhodi ezempilo?
I-PCC iyakwenza hhayi iziguli ezikhokhiswayo, ezinye izikhungo zokunakekelwa kwezempilo, Odokotela kanye nama-APC, noma uMnyango Wokuphatha Omakadebona Bezindaba (VAA) ukuze ucele amakhophi amarekhodi ezokwelapha esiguli.
Ngiwathola kanjani amakhophi amarekhodi ami ezokwelapha?
Ukugunyazwa Kokusebenzisa/Ukudalula Ulwazi Lwezempilo Oluvikelekile kufanele lusayinwe isiguli noma omele isiguli.
Ukuthola Ifomu Legunya Lokusebenzisa/Ukudalula Ulwazi Lwezempilo Oluvikelekile chofoza lapha.
Sicela uchofoze lapha ukuze uthole imiyalelo yokuthi ungakugcwalisa kanjani Ukugunyazwa Kokusebenzisa/Ukudalula Ulwazi Lwezempilo Oluvikelekile.
Ngicela, uma ungakwazi ukuphrinta ifomu Xhumana nathi kulwazi lokuxhumana.
Uma isigunyazo esigcwalisiwe, esisayiniwe nesinedethi sesitholwe uMnyango Wokuthobelana, imininingwane eceliwe izothunyelwa kumamukeli.
Isigunyazo siphelelwa nini isikhathi?
Ukugunyazwa kuzophelelwa yisikhathi ezinsukwini ezingama-60 ngemuva kosuku okusayinwe ngalo. Ungafaka idethi ehlukile endimeni yesithathu ekhasini lesibili uma udinga ukuthi isigunyazo sisebenze izinsuku ezingaphezu kwezingama-60. Ukugunyazwa ngeke kusebenze kunoma yisiphi isikhathi esingaphezu konyaka owodwa.
Ngisithumela kuphi isigunyazo sami esigcwalisiwe?
Sicela uthumele zonke izigunyazo ku:
Qaphela: Umnyango Wokuthobela Imithetho
Ithini inombolo yefeksi engizothumela kuyo ukugunyazwa kwami ​​okuqediwe?
Sicela uthumele isigunyazo sakho ngesikhahlamezi ku-833-776-3635.
Ngingakwazi nge-imeyili ukugunyazwa kwami ​​okuqediwe?
Yebo. Isigunyazo esigcwalisiwe singathunyelwa nge-imeyili ku HIPAA2@prairieheart.com
Ngidingani ukuze ngithole amarekhodi ezempilo esigulini esishonile?
Ulwazi lwempilo yomuntu oshonile lungakhishwa ngesicelo esibhaliwe esivela kumabi wefa noma umqondisi wempahla yomuntu oshonile noma i-ejenti eqokwe umufi.
Kuthiwani uma lingekho i-ejenti yomuntu oshonile?
Uma engekho umabi wamafa, umlawuli, noma i-ejenti futhi umuntu engazange anqabe ngokuqondile ukudalulwa kwamarekhodi akhe okwelashwa ngokubhaliwe, khona-ke ulwazi lwezempilo lomuntu oshonile lungakhishwa lapho ethola leli fomu elilandelayo: Ifomu Eligunyaziwe Lokuqinisekisa Isihlobo
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthola amarekhodi ami okwelashwa?
Ukuze kukhululwe irekhodi lezokwelapha, kungathatha izinsuku ezingafika kwezingu-30 ukuthola amarekhodi akho. Sicubungula izicelo ngendlela ezitholwa ngayo. Nokho, ukuqokwa okuzayo, izinqubo, kanye nezimo eziphuthumayo kusetshenzwa njengesicelo se-STAT.
Singakwazi ukucubungula isicelo ngosuku olufanayo, uma kubhekwa abasebenzi kanye nolwazi oluphelele futhi luyatholakala. Ungathintana Nomnyango Wokuthobelana ukuze uhlole isimo sesicelo sakho.
Ubani ocubungula ukukhishwa kwerekhodi lami lezokwelapha?
UMnyango Wokuthobela imithetho usebenza zonke izicelo zamarekhodi.
Ngingakwazi ukusayina ifomu lokugunyaza futhi ngithathe amarekhodi ezokwelapha ngesikhathi esifanayo?
Sicela uxhumane noMnyango Wokuthobelana ukuze uhlele ukucutshungulwa kwerekhodi lezokwelapha, isikhathi sokulandwa, kanye nokusayina ukugunyazwa. Umnyango Wokuthobelana uzodinga isikhathi esanele sokucubungula isicelo kanye nokuqinisekisa ukukhululwa okufanele kwezinqubo zolwazi lwesiguli ziyaqedwa.
Ingabe omunye umuntu ngaphandle kwesiguli angalanda amarekhodi ami okwelashwa?
Yebo, amarekhodi kungenziwa ikhishwe noma ubani Icacisa nesineke ekugunyazweni. I-ID yesithombe iyadingeka lapho ngiphakamisa amarekhodi yezokwelapha.
Ngingakwazi ukusebenzisa isicelo esifanayo ukuze ngithumele amarekhodi ezindaweni ezahlukene?
Cha. Sidinga ukugunyazwa okuhlukile ngendawo ngayinye.
Ingabe ngidinga ukugunyazwa okuhlukile kudokotela ngamunye we-PCC?
Cha, i-PCC inerekhodi elilodwa le-Electronic Medical. Wonke amarekhodi akho ezokwelapha abekwe eshadini elilodwa.
Kungani ukugunyazwa kufanele kubhalwe phansi nosuku lokusayina?
Ukuqinisekisa ukugunyazwa kwesiguli ukukhipha imininingwane yezempilo.
Uma ngilanda i-Prairie Heart Institute yase-Illinois APP ocingweni noma kuthebhulethi yami noma ngibhalisela i-newsletter yakho, ulusebenzisa kanjani ulwazi lwami?
Asiqoqi noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kusuka ku-Prairie Heart App. Ulwazi olufakayo lugcinwa kuphela ocingweni lwakho noma kumakhalekhukhwini wakho futhi aluqoqwa noma lugcinwe yiPrairie Cardiovascular noma iPrairie Heart Institute yase-Illinois nganoma iyiphi indlela. Uma ukhetha ukungena ku-newsletter yethu, ikheli lakho le-imeyili kuphela eligcinwe ngenjongo yokukuthumelela incwadi yezindaba. I-Prairie Cardiovascular kanye ne-Prairie Heart Institute yase-Illinois azisoze zathengisa ikheli lakho le-imeyili futhi ungahoxa noma nini.
Landa i-Prairie App
I-Prairie Heart Institute App yenza kube lula ukuhlala uxhumekile. Ngokuthinta inkinobho, thola udokotela we-Prairie Heart noma uveze izikhombisi-ndlela eziya endaweni ye-Prairie Heart eseduze nawe. Ngaphakathi nohlelo lokusebenza, isigaba sekhadi le-wallet ledijithali le-“MyPrairie” sikuvumela ukuthi ugcine yonke imininingwane yokuxhumana nodokotela bakho, imithi yakho, izinto ezingezwani nazo, imininingwane yomshwalense kanye nokuxhumana nekhemisi.
Isaziso Sokungabandlululi: isiZulu
Usizo Lolimi: Deitsch | Deutsch | isi-Español | Français | Hmoob | Italian | Polski | I-Tagalog | Tiếng Việt | Russian | iculo | العربية | हिंदी | ພາ ສາ ລາວ | 한국어 | 繁體 中文
UPrairie Cardiovascular unguDokotela kanye ne-APC yokunakekelwa kwempilo yenhliziyo nemithambo yegazi kanye nokwelashwa ezindaweni eziningi phakathi nendawo yonke ye-Illinois. Inhlangano yethu ihlinzeka ngodokotela benhliziyo abahamba phambili esifundazweni, ngokunemba okudumile okuhlinzayo nezeluleko zochwepheshe mayelana nokukhathazeka okuhlobene nenhliziyo. Sihlola futhi selaphe ngemithi yazo zonke izimpawu zenhliziyo ezivamile njengezinhlungu zesifuba, umfutho wegazi ophakeme, umfutho wegazi ophakeme, ukukhononda, ukushaya kwenhliziyo, i-cholesterol ephezulu, nesifo. Sinezindawo ezimbalwa ezihlanganisa amadolobha amakhulu njenge-Decatur, Carbondale, O'Fallon, ne-Springfield.
Uhlelo Losizo Lwezezimali lwe-HSHS